Eny, ao amin’ny tranonkala»fifandraisana Lehibe»koa dia tsy maintsy nandoa ny endri-javatra. Indrisy anefa fa, tsy misy fandoavam-bola dia zavatra tsy hainy, satria dia ara-barotra tetikasa. Ary mbola»fifandraisana Matotra»tsy hanelingelina ny fifandraisana ary tsy mitaky vola avy aminao»fotsiny noho ny maha». Ny sasany nandoa ny endri-javatra manolotra fahafahana vaovao, nefa dia atao foana raha tsy misy azy ireo.
Ny fahafaha-miasa ny tetikasa no tsy mametra ny fifandraisana.
Na raha toa ka tsy mandoa ny dime, ianao dia ho afaka tanteraka ny fifandraisana. Ary mbola eo ny Mampiaraka toerana ny»fifandraisana Matotra»ary misy ny fisoratana anarana maimaim-poana
← Raiki-pitia amin'ny lehilahy manambady ny Raiki-pitia amin'ny lehilahy
Mpanadala Chat tsy misy fisoratana anarana - Video-Mampiaraka →